7000 ~ 8000 Kyats
Myat Thitsar ကုမ္ပဏီမှ Formica Designs အမျိုးမျိုးကို တင်သွင်းဖြန့် ချီရောင်းလျက်ရှိပါ သည်။ပေါ့ပါးကျစ်လစ်သော ဒီဇိုင်းပုံစံ အမျိုးမျိုးကိုစိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ Formica ဖြင့် အသုံးပြုထားသော ကောင်တာများ၊ဘီဒို တံခါးရွက်နှင့် အခြားမျက်နှာပြင်များ အတွက်တာရှည်ခံပလပ်စတစ်ဖျင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့် မျက်နှာပြင်များ ဖုံးအုပ်ဖို့အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ် ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါက Myat Thitsar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Granite Series Flooring ကြမ်းခင်း အလှဆင် ကြွေပြားများ
ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းပုံစံ ဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော အရည်အသွေးမြင့် ကြမ်းခင်းပြားများ ဖြစ်သည်။သင့်၏ နေအိမ်၊ရုံးခန်း များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Shopping Mall များ နှင့် ရေချိူးခန်းများပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။ကြမ်းခင်းများကို အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင် ဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြာရှည်အသုံးခံပြီး အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ဈေးနှုန်းမှာတော့ ၅၅၀၀ ကျပ် မှ ၂၉၉၀၀ ကျပ် အထိ အမျိူးအစားအလိုက် စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူ အားပေးနိုင်ပါသည်။ရွှေစက် ဒီဇိုင်း ကျောက်ပြား အမျိူးအစားကို ၂ပေပတ်လည် မှာ ၂၃၇၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
အန္တရာယ် ရှိကြောင်း အချက်ပြ ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ် ( Billboard )
NTS Myanmar ကုမ္ပဏီမှ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးဝင်သည့် သန့်ရှင်းရေးဧရိယာနေရာများအား မဝင်မိစေရန်အတွက် တားမြစ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်သည့် ( Cleaning Billbord ) ကိုလူကြီးမင်းတို့ အတွက် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။ ၄င်းသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အန္တရာယ်ရှိသော နေရာများကို မဝင်ရော က်မိစေရန်အတွက် သတိပေးတားမြစ်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ် ( Billboard ) ပစ္စည်းတစ်မျိုးပ င်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အဆောက်အဦးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသော အသုံးဝင်သော ဆိုင်းဘုတ် ( Billboard ) ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြော င့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းဆိုင်းဘုတ် ( Billboard ) ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက NTS Myanmar ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူ နိုင်ပါသည်။
Granite Series Flooring ကြမ်းခင်း ကြွေပြားများ
မြှောင်းပုံ အိမ်ခေါင်မိုး Steel Roof Sheet
မြှောင်းပုံ အိမ်ခေါင်မိုး သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သွပ်ရည်စိမ်သတ္တုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦးသုံးပစ္စည်း/ အိမ်ခေါင်မိုးသုံး ပစ္စည်းအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါသည်။ မြှောင်းပုံ အိမ်ခေါင်မိုး (Excellent) ကို အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်သာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ဂိုထောင်များဆောက်လုပ်ရာတွင်ဖြစ်စေ ကြာရှည်ခိုင်ခံ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Galvanized Steel Coil နှင့်ပတ်သက်၍ ရရှိနိုင်သောအရောင်များ Aluzinc, Snow White, Cream, Light Brown, Apple Green, Green, forest Green, Ligh Gray, Sea Blue, Taiwan Blue, Fina Blue, Brown Brick, Red Audumn, Red, Cadminum Red and Orange စသည်အရောင်များဖြစ်ကြသည်။ Customer များ၏ လိုအပ်ချက်ကို လိုက်၍ One Stop Solution Service ဖြင့် ဆောင်ရွက် ရောင်းချပေးသလို အရည်အသွေးမှာလည်း စိတ်ချရသဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏အဆောက်အဦး ခေါင်မိုးအတွက် အမိုးပြားများကို ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တော့ Golden World နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Granite Series Flooring ကြမ်းခင်း ကြွေပြာများ
CeTeau အမှတ်တံဆိပ် Geotextileသည်မြေသားပျက်ဆီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးရေကြီးရေလျှံမြေသားပြိုကျခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။မြေဆီလွှာပြတ်ရွေ့ခြင်းများကိုလဲကာကွယ်ပေးပါတယ်။✅ မြေသားမကောင်းသောနေရာများတွင်မြေသားတည်ငြိမ်မှုရရှိစေနိုင်ပြီး၊မြေသားကိုထုပ်ပိုးပြီးမြေဖို့ခြင်း၊မြေသားတည်ငြိမ်မှုရှိပြီး Vertical Loads များကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်၊ Soil Soft Areas &amp; Marine များနှင့်ဆည်မြောင်းတာတမံများ၊မြေထိန်းနံရံလုပ်ငန်းများ၊ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းအောက်ခံမြေသားပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မြေသားကြံ့ခိုင်မှုရရှိစေနိုင်ပြီးမြေသားအတွင်းမှရေစီးဆင်းထွက်မှု system ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သောဖျင်စဖြစ်ပါတယ်။ ✅Tiger Supply Company တွင်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ For more information
GL အလူဇင့်ကာလာစတီးအမိုးပြား Color Coated Zinc Steel Roofing Sheets
သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ပြင်းထန်သော အပူချိန်မှကာကွယ်ပေးသည်။အပူရှိန်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပေးနိုင်ပြီး ခိုင်ခန့်ကာ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသည်။ ၅၅ % အလူဇင့်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော စတီးအမိုးပြားများဖြစ်ပါသည်။ဝယ်ယူအားပေးသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် အကုန်အကျခံရကျိုးနပ်စေပြီး စိတ်တိုင်းကျစေမည်
Through-colour - All Eagle Roof Tiles through-colour tiles are manufactured from inorganic iron pigments mixed in with washed sand and cement during the production process. This results inacolourfast finish that will last for decadesAvailable in: Red, Brown, Slate Grey, Terracotta, Desert, Viva.Mixit - The Eagle Roof Tile colour blends are increasingly popular, providing added interest in urban landscapes and harmonizing particularly well with natural environments. သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး ပြင်းထန်သော အပူချိန်မှကာကွယ်ပေးသည်။အပူရှိန်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပေးနိုင်ပြီး ခိုင်ခန့်ကာ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသည်။ ဝယ်ယူအားပေးသော လူကြီးမင်းများအနေဖြင့် အကုန်အကျခံရကျိုးနပ်စေပြီး စိတ်တိုင်းကျစေပါသည်။၅၅ % အလူဇင့်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော စတီးအမိုးပြားများဖြစ်ပါသည်။
G-Seven Ceramic Tile 600x600 ကြမ်းခင်းပြားများ
Code-6A00A ဖြစ်ပြီး ကြွေကုတ်တင် တစ်ဆခွဲပိုမို ထူထပ်၍ ရေစုပ်နိုင်စွမ်း ၀.၅% ရှိသောကြောင့် Quality အထူးကောင်းမွန်သော ကြမ်းခင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။အဖြူရောင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သင့်ကြမ်းခင်းကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ် လှပစေပြီး အလင်းရောင်ပိုမို ရရှိစေသည်။သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရလွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်ရလည်း အထူးကောင်းမွန်စေသောကြောင့် အသုံးပြုသူ Customer များ စိတ်တိုင်းကျ အကြိုက်တွေ့စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။အရောင်ကျွတ်ခြင်း နှင့် အရောင်လွင့်ခြင်းကို အာမခံ အနှစ် ၃၀ ဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။